Fauzil Dhambaal caashaq 20.08.2021 20.08.2021 Comments
DHAMBAAL W/Q: Ramla Gobdoon
Waxaad Qalbigeyga ka sameysatay mudul salkiisu adag yahay, hadana ay ka buuxaan xiiso, farxad iyo ififaalada hami nolol cusub. Waxaan kuu caashaqay xad ka balaaran inta aadan ogaan karin xaqiiqduna aan qiyaastaas u gaaray waxey tahay burhaantaada ayaa maalinkasta siisa iftiin gaara ah oo qalbigeyga ka dhex shidan.
Xitaa hadii aan si kasto isku dagaalno waxaa kuu baahan nafta oo aad dawo iyo dugsi u tahay. Ma ogtahay nafteydaay in holaca qalbigeyga ka shidan qofka keliya ee demin kara aad adigu tahay, Mase la socotaa in codkaagu uu ii furo sameecadaha maqalka dhagaheyga.
Waxa Jaceyl dunida yaalla waxey soo wada degeen qalbigeyga, waxaana dareensahay cabsi iyo hadana farxad uu xishood humaag gelinaayo. Ma ogtahay nafteydaay maalinta aan kulanay in ay ii tahay bishaaro aan ebedkey iloobi doonin, waa maalintii indhaheyga iyo wadnaheyga ku qanceen dhoolacadeyntaada iyo kaftan macaanidaada.
Waa maalintii ay gacanteyda ka baxday xakameynta nafteyda. Xitaa hawada aad ku neefsaneyso Calaashaan Xaafadda aad dagantahay waan ka jeclahay dunida inteeda kale, mana qiyaasi kartid sida aan uga xumahay in aan kala tagno.
Dadku wey ila yaabaan sidii in aan Jaceylka qalad ka galay, laakiin arinku sidaas maahee wexey igu hestaan wax sax ah oo wexey la yaabanyihiin sida aan Jaceylka Daacadda ugu ahay ee aan Nafteyda adiga kaaga Jecelahay. Macaan Ogoow indha aan wax ku arko waa adiga, dhagaha aan wax ku maqlo waa adiga, Wadnaheyga dhiigga sifeeyana waa adiga. Waxaan sidaas u noqday waa hami fog oo ah inta Nolosheyda ka dhiman in aan adiga kula qaato, meesha aan ka fakarayo maanta iyo Barri maaha Macaan ee waa inaan wada noolaano xittaa Aakhiro.
Macaan badan aduunka adiga ayaan kuu Jeclahay mana ku ilaawayo inta aan noolahay meel aad adiga ka fogtahayna kuma noolaan doono. Qalinkii Asma Maxamuud Hassan.
Si aanan qiyaasi karin ayaan kuu tebay. Waxa aan is waydiinayaa, oo aan la yaabbanahay, sida aan ugu adkaystay muddada fog ee aan ka la maqannahay. Malaha qof adag ayaan noqday. Ma aqaanno waxa is beddalay. Dhowr sano ayaan sii ka la maqannahay. Waan ka la dhunnay. Waan ka la dheeraannay.
Is la xilligan oo aan qorayo warqaddan ma sheegi karo halka aad ku sugan tahay. Adduun iyo xaalkiis dheh. Waxa aan is la soo qaadannay intii u badnayd ee nlosheenna.
Waan is la soo kornay. Waan is la soo hanaqaadnay. Dugsi iyo iskool ayaan is la soo wada dhigannay. Xitaa xaafadaheenna ayaa is ku dhegnaa oo isu dhawaa. Si aad ah waliba. Alla maxaad qof wanaagsan oo ii naxa ahayd! Waad ii ogayd in aan kaa yarahay sidaas darteed ayaad iigu naxriisan jirtay. Alla maxaad ii damqan jirtay! Horta anigu fulay ayaan ahaa, adiga ayaanse geesi ku gu ahaa. Maxaad dartay dagaallo badan u gashay! Maxaad ii hiilisay aniga oo gar darran!
Intaad dadka iyo ilmaha kalaba iga celiso ayaad si gaar ah ii waanin jirtay. Waad ii caqli celin jirtay. Waxa aad iiga digi jirtay in aanan ku laaban qaladka aan sameeyo. Anna waan kuu ogaa in aad iga waynayd oo waan ku dhagaysan jiray. In kasta oo aan aad u dhib badnaa yaraannimadaydii madax adeegna uu ii raacsanaa haddana waad ila jirtay mar walbo. Maalin aad igu xanaaqday ayaan xusuustaa. Laftirkaagu waad yarayd oo wax badan iga ma waynayn.
Maalintaas waan murugooday. Waxa aan ka baqay in aan ku waayo oo aadan dib iigu soo laaban. Aniga ayaa dambiga lahaa, waayo hadalkaaga ayaan qaadan waayay. Adiga ayaase ii yimid oo i raalligeliyay. Alla maxaad qof wacan ahayd! Markii aan carruurnimada ka soo baxnay ee aan soo roonaannay aad ayay nolosheennu isu beddashay. Dhallinyaro soo kacay oo ay noloshuba markaa biloow u tahay sidooda ayaan ahayn. Alla maxaan wax walba xiisaynay.
Maxaan wax walba is ku daynay in aan tijaabinno. Waxa aan isu haysannay in aan dunidaba leennahay. Ma xusuusataa habeenkii aan xafaladda aadnay? Xaflad aan na laga casuumin ayay ahayd. Ciddii deriskeenna ahayd ee wiilsha iyo gabdhaha waawayn lahaa ayaa xafladdaasi qabsanayay. Si xoog ah ayaan ku jiirnay albaabka oo aan gudaha u gudubnay. Alla maxaan habeenkaas wax aragnay! Dad wada labbisan oo midabbo ka la duwan leh ayaa goobta is ku gu yimid. Gabdhahaa ugu sitay meesha.
Ilaa iyo hadda xusuustayda ka ma bixin habeenkaas. Fursad aad ku la hadasho gabadhii ku dhex qaadday ayaad meesha ku heshay. Waa adigii iga tegay markii aad sheedda ka aragtay iyada kaligeed oo cabitaan meel la taagan. Malaha buuqa iyo muusigga codka dheer ayay soo dhibsatay markaa. Horta anigu waan garan waayay muuqeeda. Si cajiib ah oo ay indhuhu u bogayaan ayay u soo labbisatay. Saakada ka jeexan dhinacyada lugaha ku aaddan ee ay xirnayd iyo timaheeda ayaa aad isu lahaa.
Alla gabadhu maxay qurux badnayd oo ay tima jilcanayd! Gortii aad iyada aragtay ayaad anigana i illowday. Ma qof miirkiisu dhanyahaa jira marka uu arko gabar sidaa oo kale ah.
Sidii aad xaggeeda ugu dhaqaaqday ayaan ka yaabay. Kollay lugahaaga ku ma aadan socon habeenkaa. Wixii intaa ka dambeeyay waa anigii gudaha u galay guriga. Reerku in ay ladnaayaan waxaa laga garan karay guriga ay degnaayeen. Habeenkaa in aan guriga ku dhex dhumo ayaan ka baqay oo aan garan waayo meel aan ka soo baxo.
Nalalka bixinayay iftiinka ka la duwanaa ayaa marba midab u yeelayay dadkii gudaha ku jiray iyo muuqaalka meeshuba. Intii aan korontooyada dhex socday ayaan arkay kii aan kaaga sheekeeyay. Kii aan kuu sheegay in aan la dhacay oo xaafadda ku cusbaa. Waa innagii mar bas wada raacnay. Markaas ayuu magaciisa ii sheegay, kolkaan arkay isaga oo meel gees ah taleefankiisa la taagan ayaan ku leexday.
Waliba magaciisa ayaan kor ugu dhawaaqay. Alla geesisaniyaayee! Maya, anigu ma ahayn wixii u yeeray. Wax ayaa iga hadalsiinayay kolleey. Habeenkaa jawi deggan ayuu ku jiray sidaa darteed si fiican oo furfuran ayay sheekadu noogu baxday. Gabadhihii xaafadda degnaa oo dhan ayaan gudaha ku arkay oo wada sheekeesannay. Wixii intaa ka dambeeyay qof meesha ka casuuman ayaan u ekaaba, gebagabadiina isaga ayaa i soo kaxeeyay oo xaafadda ii soo raacay.
Adigu waxa aan ku gu ogaa gabadhii, ima aadan soo raadin anna ku ma soo raadin. Maxaan isa soo raadinnaa kuwii aan raadin jirnay ayaan gaarkeen u helnayee? Subixii ayaadse iiga sheekaysay in aad iyada raacday.
Habeenkaasna habeen dheh. Habeenno iyo dharaaro kale oo dhacdooyinkooda leh ayaan soo wada marnay. Ma anigaaba hadal ku soo koobi kara, waliba adiga oo iga maqan oo aan ila jiibinayn!
Alla maxaan saaxiibkayoow kuu xiisay! Taloow xaggee ku maqantay haddeer? Waan ka la baahnahay oo ka la baadiyownay. Xaalad sidee ah ayaad saaxiibkayoow ku sugan tahay? Xaggee ka ga nooshahay dunidan ballaaran ee aadka u ka la fog? Maxaad ku maqan tahay muddada intaa la eeg? Maxaad ii cidlaysay? Wehalkaygii ayaad ahayd. Qofka aan ku nefiso ayaad ii ahayd. Mataankayga ayaad ahayd.
Waad fogaatay. Waad iga tagtay. Adigu ma ii xiistay? Ma is waydiiysaa halka aan ku dambeeyo? Waa adigii ii sheegi jiray in aad i jeceshahay.
Waa adigii igu dhihi jiray in aad xiisayso la jooggayga iyo sheekadayda. Goorma ayaan dib u midoobi doonnaa? Goorma ayaan wada fariisan doonnaa oo wada faallayn doonnaa wakhtiyadii na soo maray? Wakhtigii ina ka la fogeeyay ee ina ka la dhumiyay mid habaaran ayuu ahaa.
Waxa aanse ka baqayaa in uu dib noo kulmin waayo. Waa marka uu waxbayahay yahay wakhtigu.
Markii uu magaalada ayaamo joogayna dowladdii baa burburtay ka dibna Garowe ayaa uu yimid. Wuxuu shaqo ka bilaabay Waardiye, dabadeedna waa uu guursaday. Shaqadii Waardiyaha wuxuu uga wareegay Sarifle. Wiilkiisii curadka ayaa uu u bixiyey Salaad. Nolol adag oo dhib badan oo duruufo ku hadoodilan yihiin ayaa uu ku barbaarshey oo uu wax ku baray Salaad illaa uu dugsi sare ka saaray.
Salaad labo gabdhood baa ku xigay oo dugsi dhexe ayaa ay ka baxeen, midna waa la guursadey, midna xaafadda ayaa ay u adeegtaa. Warfaa wuxuu ku hamminayaa in uu wiilkiisa Salaad ku nasan doono. Wuxuu ka shaqeeyaa waa Sarif shiddo badan oo hawl badan balse dhaqdhaqaaq yar. Salaad wuxuu dhammeeyey dugsi sare, wuxuu ku wareersan yahay waxa uu baran lahaa. Ma oga wuxuu hibo gooniya u leeyahay oo uu kusoo bixi lahaa.
Maalin ayaa ay israaceen dhallinyaro ay isku xaafad yihiin. Iyaga oo guriga usoo socda oo isla socda ayaa Salaad dhankiisa waxaa ka sharqamay waraaq A4 ah oo dabayli wadato.
Salaad waraaqdii baa uu kor u qaadey mise dhankii rognaa qoraal baa ku qoran. Isaga oo waraaqdii weli ku mashquulsan ayaa dhallinyaradii fariisteen jiriddiin aan meesha ka fogayn. Salaad na hawraarsan buu yiri. Markii uu dhameeyey waraaq akhrintii ayaa saaxiibadi ku dhaheen saaxiib maad wariye noqotid, waad kusoo bixi lahayde.
Wixii ku qulbanaana xal ayaa uu u helay. Waraaqdii uu Salaad akhrinayey waxay ahayd waraaq dowladda hoose ka soo biddey oo ku saabsanayd dhulul la isku haystay! Mid uu u dooranna ma uusan garanayn. Wuxuu bilaabay kuliyadda saxaafadda.
Wuxuu ogsoon yahay xaaladda adag ee lagu soo koriyey, wuxuu niyadda ku hayaa in uu reerka u noqdo gurgurshaa ay ku nastaan oo ku haqab beelaan. Wuxuu noqday arday dadaal badan oo jaamacadda ka sheeggan. Habeenkii xilli danbe ayaa uu seexdaa sida uu wax u akhrinayo.
Sanadkii ugu horreeyey ayaa uu noqday ardaygii ugu sarreeyey jaamacadda oo dhan. Intaas waxaa u dheeraa in uu lashaqo bilaabay Idaacad Garowe ka jirtay. Sanad uusan wax lacaga ka qaadanayn ayaa uu la shaqeeyey idaacaddii. Waayo-aragnimo badan ayaa uu ka dhaxlay.
Salaad markii uu si fiican u muquurtay saaxadda saxaafadda, wuxuu xog-ogaal u noqday halista ay leedahay inaad Soomaaliya wariye ka tahay! Caqabado badan oo sidii gadaamada iswada suran oo warfidiyeenadu ku dhex shaqeeyaan.
Kanshaha ay helayaan waxaa ka badan luggooyada ay dhaxlayaan. Helidda war sugan, waxaa ka hilis badan fidinta warkii la helay. Salaad marna uma uu joojin hor-is-taagga uu la kulmayey. Muddo kooban ayaa uu ku helay magac iyo maamuus sare.
Waxa uusan ku baraarugsanayn in caqabadaha saxaafadda ay sii kobcaysay marba marka ka danbeeya. Sanadkii ku xigayna waxaa loo soo wareejiyey magaalada Gaalkacyo. Wuxuu yimid magaalo wariyayaasha si gaar ah loo u gaarsado. Markii uu shaqo bilaabay, agaasimihii idaacadda ayaa kula dardaarmay in uu diktoonaado. Oo sabab? Warka markii aad idaacadda ka faafinaysid ka hor waa inaad ku eegtaa indho qabiil.
Haddii qabiil gaar ah warka ka dhadhamiya wax iyaga dhibaato ku ah, idaacadda ayaa ay soo aadayaan. Mucaaradka wixii dhibayana waa inaad iska ilaalisid.
Salaad aad ayaa uu isku ilaaliyaa. Nolol sidii miro dhunkaaleed u dhadhamaysa ayaa uu galay. Qof la yiri is ilaali waa lagugu daba jiraaye, nolol qurxoon ku noolaan mayo. Sanad markii uu joogay oo uu isleeyahay magaalada waad la qabsatay ayaa isku habeen la dilay labo saaxiibadiis ah oo shaqadu walaaleysay.
Murugo iyo walaac daran ayaa lasoo darsay. Noloshiisha waxaa uga daran reerka uu isagu biilo oo aan garab kale haysan.
Ayaamo markii dhimashadii saxiibbadiis laga joogo ayaa maalin lambar uu san garanayn laga soo wacay. Wuxuu xasuustay hadalkii agaasimaha ee ahaa ha qaban lambar aadan garanayn.
Wuxuu ku adkaystay inuusan qaban. Inyar ka dib ayaa farriin usoo dhacday. Waa uu furay. Adigaa ku xiga Cali iyo Cabdi. Waa lagu dilayaa. Wuxuu ku dhaygagay farriintii. Aad ayaa uu u welwelay. Wuxuu la hadlay agaasime Faarax una sheegay, waxa kusoo kordhay. Isaga oo luudaya biskooladna gacanta ku haysta bakadayana oo dhirtii iyo guryihii u dhaqdhaqaaqeen ayaa gurigiisii aaday. Habeenkii markuu indhaha isgaliyo ayaa uu ku qarwaa isaga oo bistoolad lala garab taaganyahay.
Wuxuu isku hambooriyey in uu xaaladdaan ku shaqeeyo oo uusan dhaarta darteed uga tagin. Rag badan oo ay soo wada shaqeeyeen ayaa la dilay. Wariyaashii waxay noqdeen mayd soconaya oo geeri u joog ah.
Salaad wuxuu soo dagay meel idaacadda u dhow. Salaad wuxuu idaacaddii u noqday tiirdhexaad biixi oo aan liicin. Diyaarinta barnaamijyada, baarista xogta iyo soojeedintaba aad ayaa u ugu dheereeyey. Waxa uuse niyadda ku hayey in uu codsado in Garowe loo wareejiyo, wuxuuse ogsoon yahay in ay agaasimaha ku adagtahay.
Wariyaashiiba waxay noqdeen wax waddanka ka cararay iyo wax la laayey. Axmed waxaa u bilaabatay maalin cusub oo noloshiisa saamayndoonta. Galab ayaa uu idaacadda ka soo baxay, dabadeed guriga ayaa uu soo aaday si uu u yara nasto. Salaaddii Maqrib markii la adimay ayaa uu guriga kasoo baxay. Isaga oo fikir ku maqan oo masaajidka u socda ayaa toobiye dhuuban nin uga horyimid. Salaad ma shakin oo wiil yar buu uula ekaaday balse markii uu garab dhaafay ayaa uu tuhmay oo wuxuu isku daray, isaga oo biskooladda gacanta la aaday iyo jalleeco.
Fiirintii Salaad iyo xabaddii lagu soo riday ayaa kulmay, xabbaddii ku aaddanayd dhabarka ayaa garabka dhex qaadday. Salaad na xabado aan liishaanayn ayaa uu furay. Saddex xabadood ayaa lagu riday. Midi way surma seegtay midna lugta qaybta jiirka ayaa ay xushay oo ka dhex baxday. Isaga oo garabka iyo lugta ka dhaawacan ayaa luuqii loogu yimid. Warar aan sugnayn oo tibaaxaya in Salaad la dilay ayaa gaaray agaasime Faarax, isaguna agaasimihii Garowe ayaa uu wargaliyey.
Markaas ayuu magaciisa ii sheegay, kolkaan arkay isaga oo meel gees ah taleefankiisa la taagan ayaan ku leexday. Waliba magaciisa ayaan kor ugu dhawaaqay.
Alla geesisaniyaayee! Maya, anigu ma ahayn wixii u yeeray. Wax ayaa iga hadalsiinayay kolleey. Habeenkaa jawi deggan ayuu ku jiray sidaa darteed si fiican oo furfuran ayay sheekadu noogu baxday. Gabadhihii xaafadda degnaa oo dhan ayaan gudaha ku arkay oo wada sheekeesannay. Wixii intaa ka dambeeyay qof meesha ka casuuman ayaan u ekaaba, gebagabadiina isaga ayaa i soo kaxeeyay prize bond guess paper guru xaafadda ii soo raacay.
Adigu waxa aan ku gu ogaa gabadhii, ima aadan soo raadin anna ku ma soo raadin. Maxaan isa soo raadinnaa kuwii aan raadin jirnay ayaan gaarkeen u helnayee?
Subixii ayaadse iiga sheekaysay in aad iyada raacday. Habeenkaasna habeen dheh. Habeenno iyo dharaaro kale oo dhacdooyinkooda leh ayaan soo wada marnay. Ma anigaaba hadal ku soo koobi kara, waliba adiga oo iga maqan oo aan ila jiibinayn! Alla maxaan saaxiibkayoow kuu xiisay!
Taloow xaggee ku maqantay haddeer? Waan ka la baahnahay oo ka la baadiyownay. Xaalad sidee ah ayaad saaxiibkayoow ku sugan tahay? Xaggee ka ga nooshahay dunidan ballaaran ee aadka u ka la fog? Maxaad ku maqan tahay muddada intaa la eeg? Maxaad ii cidlaysay? Wehalkaygii ayaad ahayd. Qofka aan ku nefiso ayaad ii ahayd. Mataankayga ayaad ahayd. Waad fogaatay. Waad iga tagtay. Adigu ma ii xiistay? Ma is waydiiysaa halka aan ku dambeeyo? Waa adigii ii sheegi jiray in aad i jeceshahay.
Waa adigii igu dhihi jiray in aad xiisayso la jooggayga iyo sheekadayda. Goorma ayaan dib u midoobi doonnaa? Goorma ayaan wada fariisan doonnaa oo wada faallayn doonnaa wakhtiyadii na soo maray? Wakhtigii ina ka la fogeeyay ee ina ka la dhumiyay mid habaaran ayuu ahaa. Waxa aanse ka baqayaa in uu dib noo kulmin waayo.
Waa marka uu waxbayahay yahay wakhtigu. Saaxiibkayoow, wali sidii ayaan anigu kuu xusuustaa. Cid booskaaga buuxin karta ima soo marin.
Maba jirto. Wali sidii ayaan kuu jeclahay oo aan kuu tebaa. Sheekooyin iyo sirar badan ayaa iga buuxa, adiga mooyee cid kale oo aan ku aaminayo ma jirto. Sanduuq furihiisa badda la gu tuuray oo aan wax walbo ku kaydsado ayaad ii ahayd. Waxa aan kuu sheego in aad hayso maahee bannaanka u ma soo saari jirin.
Horta dadku in aan is jeclayn ayay moodi jireenee ma ogtahay? Waad ogtahay. Saw adigii dhowr mar ii sheegay xan aad soo maqashay? Waan is jeclayn waa runtood, laakiin sida ay moodeen si ka duwan oo aysan malaysan karin ayaan isu jeclayn, walina kuu jeclahay anigu. Saaxiibkayoow marka aan dib kuu arko wax walba ayaan kaaga sheekayn doonaa. Waxa aan kaaga sheekayn doonaa waxyaabihii inoo ka la dambeeyay oo dhan. Kaliya marka aan dib kuu arko ayaan sheegi doonaa sirar badan oo aad keligaa ogaanayso.
Marka u horaysa ee aan dib u kulanno waxa aan ku siin doonaa hab dheer oo adag.
Ila ma ahan in aan si fudud kuu dayn doono. Ma xisaabin doono inta ay habtaasi qaadanayso. Maba daneenayo middaas. Laabtaadii diirnayd, dabacsanayd ee jacaylka iyo naxriistu ay ka buuxeen miyaan si fudud uga dhex bixi karaa? Ha sheegin. Bes inaan adiga ku arko, ka dibna ha dhacaan wax kastoo dhici lahaa.
Intaas ka dib ayaan kuu bilaabi doonaa wixii aan kuu hayay oo dhan. Maya, adiga ayaa i bilaabaya. Mise anigaa ku hor mara? Maya, waad ogtahay in aan warka iyo sheekadaba jeclahee adiga ayaa bilaabaya.
Alla maxaan u xiiso qabaa sheekooyinkaaga! Taloow meeqo sheeko ayaad ii haysaa? Labaatan ma gaarayaan? Waa ay ka badan yihiin ayay ila tahay. Marka u horayso, maalinta u horayso ee aan dib isu aragno is ku meel ayaan wada joogi doonnaa. Anigu haddii aan mar nasiib ku gu arko ku ma daynayo. Ma dhacayso in aan mar kale ka la fogaanno oo aan is wayno.
Ha ka yaabin. Aan mar uun dib kuu arko. Markaana adiga ayaa noqonaya kii la ga waynaa, anna waxa aan noqonayaa kii waynaa. Waan ku ilaashan doonaa oo si fiican kuu la socon doonaa. Ilaahay mar kale ha i kaa tuso. Saaxiibkayoow waan ku jeclahay. Si wayn waliba oo ballaaran. Aniga oo aanan ogayn meel aad ku dambayso, meel aad u joogto iyo meel aan kaa heli karo ayaan farriintan kuu soo dirayaa.
Haddii ay warqaddan ku soo gaarto, waan filayaayee, waxaa aad ogaataa in aan ku jeclahay. In aan xiisahaaga la liito oo aan adiga ku sugayo.
Xcx wiki video download 2017 free
thoughts on “Dhambaal caashaq”
26.08.2021 at 20:23
Bosanski film sin
Vulkree on Dhambaal caashaq
Copyright © 2021 Dhambaal caashaq. Powered by WordPress. Theme: Accelerate by ThemeGrill.